भूमि ट्रस्ट परिभाषा र वास्तविक जग्गा स्वामित्वको लागि प्रयोग
एक भूमि ट्रस्ट के हो?
जग्गा ट्रस्ट भनेको एक दस्तावेज सम्झौता हो जसमा सम्पत्ति धारकले सम्पत्तीको शीर्षक ट्रस्टीलाई हस्तान्तरण गर्दछ। ट्रस्टीले ट्रस्टको शर्तहरू पालना गर्नुपर्दछ र हितग्राहीको उत्तम हितमा कार्य गर्नुपर्दछ। व्यवस्थित गर्ने नै एक हो जसले विश्वास शुरू गर्‍यो। लाभ उठाउनेहरू, फलस्वरूप, एक हुनुहुन्छ जसले ट्रस्टबाट लाभ उठाउनुहुन्छ। बसोबास गर्ने र लाभ उठाउने मानिस प्राय एक र उस्तै हुन्छन्। त्यो हो, समान व्यक्तिले दुबै पद धारण गर्दछ। यसबाहेक, यो सामान्यतया त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सम्पत्ति स्वामित्व राख्नु अघि उसले कि त्यो सम्पत्ति ट्रस्टमा राख्थ्यो।
धेरै जग्गा ट्रस्टको साथ, लाभार्थीले ट्रस्टीलाई सम्पत्ति प्रबन्धन निर्देशनहरू दिन्छ। त्यस्तै, जग्गा ट्रस्ट ट्रस्टी र हकदार / सेटल गर्ने बीचको एक सम्झौता हो। लाभार्थीले सम्पत्तीको अधिकार प्राप्त गर्न जारी राख्छ। यसमा स्वामित्व राख्ने, भाँडा लिन, विकास गर्ने वा बिक्री गर्ने अधिकार समावेश छ, तर सीमित छैन।
भूमि ट्रस्ट बेनिफिटहरू
तपाईंको घरको रूपमा र तपाईंको व्यवसायको रूपमा घर जग्गा खरिद गर्न महँगो उद्यम हुन सक्छ। सार्वजनिक रेकर्ड, मिडिया, व्यक्तिगत जोखिम, र अभियोग मुद्दाहरु तपाइँ सबै अधिक उजागर गर्दछ। तपाईंलाई थाहा छ, त्यो जोखिम केवल सम्पत्तीको एक टुक्रा खरीदको साथ आउँदछ। स्पष्ट हुनको लागि, जब तपाईं जग्गा ट्रस्टको प्रयोग गर्नुहुन्छ, जग्गा जमिन खरीद गर्नु तपाईंको एक मात्र विकल्प छैन। तपाईं यसलाई विकसित सम्पत्ति किन्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पत्तीको लागि भूमि ट्रस्टको प्रयोग आकर्षक छ किनकि यसले सम्पत्ती मालिक अज्ञात राख्दछ र थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। सिधा जग्गा खरिद गर्दा ब्यापारमा अनावश्यक ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ र भविष्यको सम्पत्ति खरीदको मूल्यलाई आसमानीकरण गर्न सक्छ। धेरै जग्गा ट्रस्टहरू यस रूपमा सिर्जना गरिन्छ खण्डन योग्य ट्रस्टहरू, जसले विश्वास अनुदानकर्ताहरूलाई सर्तहरू संशोधन गर्न वा कुनै पनि समयमा ट्रस्टहरू समाप्त गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू सामान्यत: आफ्नै रूपमा सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्दैनन्। जे होस्, राम्रोसँग संरचित अपरिवर्तनीय भूमि ट्रस्टहरूले थप सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछन्।
त्यसो भए, भूमि ट्रस्ट भनेको विवेकीपूर्वक सम्पत्ति किन्नको लागि एक तरीका हो, र प्रायः कम पैसाको लागि। ल्यान्ड ट्रस्ट सिर्जना गर्नाले खरिदमा बेनामी थप गर्दछ ताकि तपाईंको व्यवसाय बढ्न र अधिक स्वतन्त्रताको साथ विस्तार गर्न सक्दछ। तर कसरी एक भूमि ट्रस्ट काम गर्दछ? हामी यो लेख भर मा गहिरो अन्वेषण गर्नेछौं।
भूमि ट्रस्टको प्रकार
त्यहाँ धेरै फरक छन् भूमि ट्रस्ट को प्रकारहरुs, तर कानूनी शब्दकोश तीन सबैभन्दा लोकप्रिय परिभाषित गर्दछ।
पहिलो प्रकारको भूमि ट्रस्ट होaसंरक्षण भूमि ट्रस्ट। यस ट्रस्टको संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्र, फार्म वा खेत जग्गा, स्थलचिन्हहरू, जल स्रोतहरू, र अधिकको रक्षा गर्ने लक्ष्य छ। प्राय: यी ट्रस्टहरूले पहिले नै संरक्षित क्षेत्रको नजिक रहेको भूमिमा फोकस गर्दछन्, किनकि तिनीहरू अझै खतरामा परेका जंगली र बोटबिरुवाहरूको जीवनको घर हुन सक्दछन्।
दोस्रो प्रकारको भूमि ट्रस्ट होaसमुदाय भूमि ट्रस्ट। यो ट्रस्ट सामान्यतया गैर नाफामुखी संस्थाहरूले समुदायमा कम आय भएका बासिन्दाहरूको लागि सस्तो आवासको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्दछ। जहाँ एक घरमालिकले सामान्यतया भवन संरचना र यो बसिरहेको भूमिको लागि तिर्नुपर्दछ, एक समुदाय भूमि ट्रस्टले उनीहरूलाई संरचनाको लागि मात्र भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। यसले मानिसहरूलाई घरहरू खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जो अन्यथा त्यसो गर्न सक्षम नहुन सक्छ।
तेस्रो र सबैभन्दा सामान्य प्रकारको भूमि ट्रस्ट कर्पोरेट भूमि ट्रस्ट हो, वाaघर जग्गा भूमि ट्रस्ट। यस प्रकारको भूमि ट्रस्टले व्यक्ति वा कर्पोरेसनहरूलाई विकास सम्पत्ति वा जग्गाको पर्खाल अधिग्रहण गर्न अनुमति दिन्छ जनतालाई उनीहरूको अधिग्रहणमा सचेत नगरी। ट्रस्टहरूमा नयाँ सम्पत्ती राख्दा गुमनाम राखिन्छ। थप रूपमा, यसले ठूलो मूल्य वृद्धि र प्रचार रोक्न मद्दत गर्दछ यदि एक प्रसिद्ध धनी खरीददारले सम्पत्तीको पछि लाग्छ। यस प्रकारको भरोसाको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक उदाहरणहरू मध्ये एउटा हो जब डिज्नीले फ्लोरिडाको ओर्लान्डोमा जग्गाको सानो सम्पत्ति खरिद गरे। ती सम्पत्तीका टुक्राहरू अन्तत: वाल्ट डिस्ने वर्ल्डमा परिणत हुने थियो र कम्पनीले ट्रस्टहरू प्रयोग नगरी सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गरेको भए त्यो महँगो हुने थियो।
यस लेखको बाँकी उद्देश्यका लागि, हामी घर जग्गा जमिन ट्रस्टहरू र उनीहरूका फाइदाहरूमा केन्द्रित हुनेछौं।
इलिनोइस भूमि ट्रस्ट
तर पर्खनुहोस् - को बारेमा इलिनोइस भूमि ट्रस्ट? तपाईंले यो शब्द एक लोकप्रिय प्रकारको भूमि ट्रस्टको रूपमा प्रयोग गरेको सुन्नुभयो होला। यसको नामको बावजुद, यो इलिनोइसमा मात्र उपलब्ध छैन।
As एक्सेटर वर्णन गर्दछ, सम्पत्तीको लागि जग्गा ट्रस्टको प्रयोग नयाँ छैन। भूमि ट्रस्टका केही भिन्नताहरू रोमन कालदेखि शुरू हुन्छन्, यद्यपि यसको स्पष्ट इतिहास 16 मा सुरू हुन्छth शताब्दी। 19 ढिलोमाth शताब्दी, तथापि, शिकागो, इलिनोइसमा सम्पत्ति मालिकहरूले पत्ता लगाए कि जग्गा ट्रस्टहरू खरीद, पकड, र घर जग्गा विकासको लागि एक ठूलो सवारी हुनेछ। यसले रियल ईस्टेट लगानीकर्ताहरूलाई निजी र गोप्य रूपमा सम्पत्तीहरू प्राप्त गर्ने तरिका प्रदान गर्‍यो। त्यस समयमा उनीहरूको जग्गाको स्वामित्व लुकाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण थियो किनकि उनीहरूलाई शहर निर्माण परियोजनाहरूमा मतदान गर्न निषेध गरिएको थियो जब तिनीहरू नजिकैको जग्गा स्वामित्वमा थिए।
जग्गा ट्रस्टको उपयोगिताको वैधानिकताका बारे कानुनी मुद्दाहरू यसको प्रतिक्रियामा आएका थिए किनकि यो एक असक्षम अधिग्रहण थियो। मुद्दा इलिनोइस सर्वोच्च अदालतमा गयो। त्यहाँ यो नियम थियो कि यदि ट्रस्टमा थोरै शुल्क लगाएर जग्गा ट्रस्ट स्थापना गरिएको थियो भने ट्रस्टलाई सक्रिय र मान्य मानिन्छ। यस नियमले भूमि ट्रस्टको भविष्यको विकासमा ठूलो असर पार्‍यो र उनीहरूले आज कसरी काम गर्छन् भनेर आकार दिन सहयोग पुर्‍यायो।
"इलिनोइस ल्याण्ड ट्रस्ट" अब अन्तिम शब्दमा छलफल गरिएको कर्पोरेट जग्गा ट्रस्टहरू समेट्ने धेरै अर्को शब्द हो।
भूमि ट्रस्टहरूको भनाइ र विपत्ति
थप पत्ता लगाउन सम्पत्तीको लागि विश्वास सिर्जना गर्दै, केहि पेशेवर र विपक्षमा हेरौं। कसरी सामाग्री काम गर्दछ यसमा गहिरो हेराई दिन्छ।
घर जग्गा वा कर्पोरेट भूमि ट्रस्टको मुख्य लाभ भनेको गोपनीयता हो। एक सम्पत्ती को शीर्षक एक ट्रस्ट मा हस्तान्तरण पछि, मालिकको नाम अदालत को आदेश बिना प्रकट गर्न सकिदैन। यो मुद्दा चलाउनबाट जोगिन मद्दत गर्दछ। यदि त्यहाँ बहु मालिकहरू छन् भने, भूमि ट्रस्टले अन्य मालिकहरूको रक्षा गर्दछ यदि कानुनी शुल्क मात्र एक मालिकसँगै ल्याइयो।
जग्गा ट्रस्टको अर्को ठूलो फाइदा भनेको लाभार्थी वा हकवालालाई सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ। एक विश्वास बिना, एक व्यक्तिको इच्छा एक महँगो कानूनी प्रक्रिया मार्फत मूल्या be्कन गर्नु पर्छ प्रोबेट भनिन्छ, जसमा कर र backण फिर्ता भुक्तान समावेश गर्दछ। जग्गा ट्रस्टहरू, व्यक्तिहरू जस्तो नभई मर्दैनन्। त्यसैले ट्रस्टमा स्थापित उत्तराधिकार योजना प्रोबेटको आवाश्यकता बिना नै रहन्छ।
जग्गा ट्रस्टको बेफाइदा गलत विश्वास हो कि यसले जमिन मालिकहरूलाई सबै दायित्वबाट बचाउँछ। सम्पत्तीको प्रबन्धसँग प्रत्यक्ष व्यवहार गर्ने मामिलामा, सम्पत्ती मालिक, ट्रस्टीको होइन, जिम्मेवार हुन्छ। ट्रस्ट पनि कर छूट छैन। कर दायित्व सेटल्टरमा प्रवाहित हुन्छ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, व्यवसायी ओएस को लागी एक जसले विश्वास गरे।
ल्यान्ड ट्रस्ट बनाम बस्ने ट्रस्ट
अर्को सामान्य ट्रस्ट मानिस रियल ईस्टेटको स्वामित्वमा प्रयोग गर्ने हो विश्वास रहनेत्यसो भए त्यो र भूमि ट्रस्ट बीच के भिन्नता छ?
As घर मार्गनिर्देशनहरू वर्णन गर्दछ, मुख्य भिन्नता ट्रस्टको स्वामित्वका चीजहरूको प्रकारमा हुन्छ। एक जीवित भरोसा, अक्सर एक परिवार ट्रस्ट भनिन्छ, आफैलाई र तपाईंको परिवारको लागि सम्पत्ति राख्न प्रयोग गरिन्छ। जब तपाईं मर्नुहुन्छ, तपाईंको नामित माध्यमिक लाभार्थीहरू प्राथमिक लाभार्थी बन्नको लागि कदम बढ्छ। ट्रस्टी, सामान्य रूपमा सेटलरले तपाईंको घर जस्तो सम्पत्तिहरू समात्दछ। प्राथमिक लाभार्थीहरूले सामान्यतया तपाईं र तपाईंको जीवनसाथी समावेश गर्दछ। तपाईंको बच्चाहरू सामान्यतया माध्यमिक लाभार्थी हुन्। परिवार भूमि ट्रस्ट सम्झौताहरू सम्पत्ती प्रोबेटबाट टाढा राख्नुहोस् र परिवारको सम्पत्ति कर दायित्व कम गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, भूमि ट्रस्टहरू प्राय जसो घर जग्गा लगानीकर्ताहरूले प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू प्राय: खण्डन योग्य हुन्छन् र सम्पत्ती मालिकहरूका लागि थप गोपनीयता प्रदान गर्छन्। तिनीहरूले उत्तराधिकारको एक लाइन पनि सेट अप गर्न सक्छन् र जीवित ट्रस्ट जस्तै प्रोबेटबाट बच्न सक्छन्, यद्यपि।
सरल सर्तमा, व्यक्तिहरूले घर जग्गा स्वामित्व गुमनामताको लागि भूमि भरोसा प्रयोग गर्दछन्। अर्कोतर्फ, व्यक्तिहरू निजी सम्पत्तिहरूको लागि सम्पत्ति योजनाहरू ह्यान्डल गर्न जीवित ट्रस्टहरू प्रयोग गर्छन्।
एक भूमि ट्रस्ट सेट अप गर्दै
भूमि ट्रस्ट सेट अप गर्न तयारीमा, त्यहाँ दिमागमा राख्नुपर्ने केहि चीजहरू छन्। पहिले, जस्तो एन्डरसन सल्लाहकार, वर्णन गर्दछ, त्यहाँ तीन मुख्य पार्टीहरू सामेल छन्: अनुदानकर्ता / व्यवसायी, विश्वस्त, र लाभ उठाउने। अनुदानदाता ट्रस्टको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र ट्रस्टमा सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी छ। ट्रस्टीले ट्रस्टको प्रबन्ध गर्दछ र सम्पत्तीको शीर्षक राख्छ। ती लाभार्थी द्वारा तोकिएको कर्तव्य व्यवस्थापन। लाभार्थी प्रायः अनुदान दिने व्यक्ति नै हुन्छ, तर यदि तपाई अझ राम्रो सुरक्षा चाहानुहुन्छ भने हितग्राही तपाईको LLC हुन सक्छ। लाभार्थीसँग सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व हुन्छ र ट्रस्टमा समावेश सम्पत्तिहरूको सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्दछ। यसका अतिरिक्त हितग्राहीसँग पनि ट्रस्टीलाई हटाउने र उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने शक्ति छ।
कागजी कार्यहरूको सर्तमा, हामी एक ड्राफ्ट गर्दछौं भूमि विश्वास सम्झौता र एक सम्पत्ति डीड। यी कानुनी पेशेवरहरूको सहायताले भरिनु पर्छ, जस्तै हामी आफैंले, जसले यी कागजातहरूमा उचित शब्द र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दछन्। तपाईलाई आफ्नो जग्गा ट्रस्टको लागि अद्वितीय नाम चाहिन्छ, जस्तै ट्रस्ट भित्र रहेको सम्पत्तीको ठेगाना। एक उदाहरण हो, "123 मुख्य सडक ट्रस्ट।"
एक विश्वस्त छनौट गर्दै
तपाईं साथ लाग्न सक्ने ट्रस्टी छनौट गर्न नबिर्सनुहोस्। विश्वस्त उदाहरण को लागी, एक विश्वसनीय मित्र वा आफन्त हो। ट्रस्टीसँग तपाईंको जग्गा ट्रस्टमा सम्पत्ति भन्दा धेरै विश्वासघाती र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हुनेछ। सम्भावित ट्रस्टीहरूको लागि खोज्नु पर्ने केही विशेषताहरू वित्तीय ईमानदारी, ज्ञान, विश्वास योग्यता, ईमानदारी, र तपाईं वा तपाईंको व्यापारको साथ साझा मानहरू छन्। तपाईं सम्पत्ति शीर्षक कागजातहरू रेकर्ड गरेपछि र ट्रस्टीको भूमिका निजी रूपमा लिनु भएपछि तपाईं ट्रस्टीले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ। अझ राम्रो, हामी तपाईको आफ्नै Wyoming LLC सेट अप गर्दछौं नमिने प्रबन्धकहरु को साथ ट्रस्टी को रूप मा कार्य गर्न को लागी तपाईको अज्ञातपना अझ बढाउन।
केही सम्भावित ट्रस्टीहरू कानूनी जिम्मेवारीको बारेमा चिन्ता गर्छन्। त्यहाँ वास्तवमै थोरै छ, यदि कुनै छ भने, ट्रस्टीले बोक्छ जबसम्म ऊ वा उसले जानाजानी बेइमान काम गर्छ। सत्य मा, बसोबास गर्ने / लाभार्थी शट कल गर्ने एक हो। उपभोक्ता दायित्व वहन गर्दछ। त्यसोभए, एक ट्रस्टी छनौट गर्नुहोस् जो एक चिन्ताजनक चिन्ता-चिन्ता होइन र जसले तपाईंलाई उसलाई वा उसको मद्दत चाहिने दुर्लभ अवसरहरूमा पूर्ण सहयोग गर्दछ। फेरी, हामीले भनेझैं तपाईं कुनै पनि समयमा ट्रस्टी बदल्न सक्नुहुन्छ।
सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व
दायित्व मुद्दमा एक अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लगानी सम्पत्तीको लागि, हामी एक जग्गा ट्रस्टको लाभार्थीको रूपमा सामान्यतया एक LLC राख्दछौं। हामी यो दुई कारणका लागि गर्छौं। पहिले, जब सम्पत्तीमा एक मुद्दा दायर गरिएको छ, LLC ले हितग्राही वा लाभार्थीहरूलाई दायित्वबाट बचाउन कार्य गर्दछ। दोस्रो, जब कसैले LLC का कुनै सदस्यलाई मुद्दा हाल्छ, कानूनमा त्यस्तो प्रावधानहरू हुन्छन् जसले त्यस सदस्यलाई LLC वा उसको सम्पत्तीमा उसको चासो हराउनबाट बचाउन सक्छ। यसमा भूमि ट्रस्ट र सम्पत्ति पनि समावेश छ। प्रायः राज्यहरूलाई सम्पत्ति सुरक्षा सुविधाहरूको लागि दुई वा बढी सदस्यहरू आवश्यक हुन्छ। वायोमिंग, नेभाडा र डेलावेयरलाई केवल एक सदस्य चाहिन्छ।
हामी सामान्यतया LLC प्रयोग गर्दैनौं जब एक भूमि ट्रस्ट एक प्राथमिक निवास छ। यो किनभने व्यक्तिगत निवास र भाडा सम्बन्धी सम्पत्तिहरू फरक कर कोटिहरूमा छन्। कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त ब्याज व्यक्तिगत कर रिटर्न र पूँजीगत लाभ छुट मा लेखेर लाभ उठाउनको लागि, कब्जाकर्ता / "घरमालिक" जग्गा ट्रस्ट लाभार्थीको रूपमा रहन्छ।
तपाईंको घर जग्गा सुरक्षा गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो अर्को घर जग्गा खरीदको लागि जग्गा ट्रस्ट स्थापित गर्नका सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो अनुभवी परामर्शदाताहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। एक जग्गा ट्रस्टको साथ तपाइँको खरीदलाई बचाउन मद्दत बिना सेट अप गर्न जटिल हुन सक्छ। पेशेवर सहयोग प्राप्त गर्न निश्चित गर्नुहोस् ताकि तपाईं मुद्दा चलाउनको लागि आफैंलाई नछोडी सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई तपाईंको विकल्पहरू खोजी गर्न मद्दत गर्नेछौं तपाईंको र तपाईंको सम्पत्तीको लागि सही कार्यको कोर्स निर्धारित गर्न।